साँढे सात लाख घरमध्ये ३ लाखमा अझै हालिएन जग, कहिले पूरा हुन्छ पुनर्निर्माण ?
कहाँ गए ३ लाख घर नबनाउने पीडित ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । भूकम्प गएको ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको पनि अढाइ वर्ष कटिसक्यो तर, पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम कारबाही भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
हरेक वर्षा झरी, भेल, बाढी र हरेक हिउँदमा हुरी, असिना र तुषारो खेप्दै पीडित माथि पीडित बन्न पुगेका भूकम्प पीडितको पीडाले सरकारलाई सुरुदेखि नै नछोएजस्तो देखिन्छ । जबकि, ५ वर्ष भित्र पुनर्निर्माण सक्ने घोषणा गरेको सरकारले सोही अनुरुप सम्पदा पुनर्निर्माणलाई गति दिन सकेको छैन ।
अझैपनि ७ लाखमध्ये ३ लाखले घरको जग पनि हालेका छैनन् । निजी आवासका लागि अनुदान सम्झौता गरेका कूल ७ लाख २० हजार ७ सय ४३ लाभग्राहीमध्ये ६९.४७ प्रतिशतले मात्रै पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेका छन् ।
पुनर्निर्माण सुरु भएका निजी घरको संख्या पाँच लाख पुगेको छ । तर, करिब १ लाख ९५ हजारमात्रै घरको पुनर्निर्माण सकिएको छ ।
३ लाखले पुनर्निर्माण सुरु गरेकै छैनन्
सात लाखमा करिब ३ लाखले पुनर्निर्माणको काम सुरु नै गरेका छैनन् । जम्मा लाभग्राही सूचीमा ७ लाख ८८ हजार १५ पीडित छन् ।
यसमध्ये ६८ हजारभन्दा बढीसँग अनुदान सम्झैता हुन पनि बाँकी छ । करिब ३० प्रतिशत पीडितले घरको पुनर्निर्माण सुरु नै गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको असार १४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ५ लाख ७ सय ३६ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ ।
लगभग २ लाखको पुनर्निमार्ण सम्पन्न
५ लाख ७ सय ३६ ले घरको पुनर्निर्माण सुरु गरेकोमा १ लाख ९४ हजार ७ सय ३१ घरको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । अहिले झण्डै ३ लाख घर निर्माणाधीन छन् ।
करिब ३ लाखले घरको निर्माण थालेकै छैनन् । कहाँ गए ३ लाख घर नबनाउने पीडित अत्तोपत्तो छैन ।
सबैभन्दा बढी पुनर्निर्माण भएको सिन्धुपाल्चोक
सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा ७३ हजार ४ सय १९ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ ।
त्यसैगरी, नुवाकोटमा ६४ हजार १ सय ६१, धादिङमा ५९ हजार ३ सय ९८, गोरखामा ५२ हजार ४ सय ४८, दोलखामा ५२ हजार २ सय ३५, काभ्रेपलाञ्चोकमा ४३ हजार ८ सय २, रामेछापमा ३८ हजार ३ सय ४२ घरको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
अति प्रभावित जिल्लाहरुका अतिरिक्त कम प्रभावित जिल्लामा पनि निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । कम प्रभावित जिल्लामध्ये लमजुङमा सबैभन्दा धेरै ४ हजार ७ सय ४५ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको संख्यामा पनि तीव्र बढोत्तरी भइरहेको छ । ४ लाख ५५ हजार ५ सय ८१ लाभग्राही दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने तेस्रो किस्ताका लागि २ लाख ६ हजार ८ सय ९२ लाभग्राही योग्य भइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय गुनासो सम्बोधनबाट लाभग्राहीको संख्या पनि थपिएको छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म छुट तथा पुर्नजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त विश्लेषणबाट २० हजार ३ सय १० पुनर्निर्माण लाभग्राही थपिएका छन् ।
त्यसैगरी ११ हजार २ सय ९७ प्रवलीकरण लाभग्राही थपिएका छन् । प्राधिकरणले गत बिहिबार बिहान बसेको कार्यकारी समिति बैठकले विभिन्न ९ जिल्लाका १७ ओटा स्थानीय तहका ६ हजार २ सय ८२ पुनर्निर्माण लाभग्राही र २ हजार ८ सय ५७ जनालाई प्रवलीकरण लाभग्राहीमा थप गरेको थियो ।
भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार पाउँछन् भने तेस्रो किस्ताबापट १ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । हाल लाभग्राही सूचीमा ७ लाख ८८ हजार १५ पीडित छन् ।